येशूले दिनुभएको डाँडाको उपदेश (मत्ती ५-७) | बाइबलको कथा
येशू डाँडामा सिकाउनुहुन्छ
येशूलाई हेर त। उहाँ गालीलको डाँडामा बसेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँनजिकै बसेका मान्छेहरू उहाँका चेलाहरू हुन्‌। उहाँले १२ जनालाई आफ्नो प्रेरित बनाउनुहुन्छ। प्रेरित भनेको येशूका खास चेलाहरू हुन्‌। के तिमीलाई उनीहरूको नाउँ थाह छ?
त्यहाँ येशूसँग बसिरहेको एक जना प्रेरितको नाउँ शिमोन पत्रुस हो। उसको भाइ अन्द्रियास पनि येशूको प्रेरित हो। येशूसँगै याकूब र यूहन्‍ना पनि छन्‌। उनीहरू दाजुभाइ हुन्‌। अर्को प्रेरितको नाउँ याकूब हो। त्यसै गरी अर्कोको नाउँ पनि शिमोन हो। दुई जना प्रेरितको नाउँ यहूदा हो। तीमध्ये एक जना यहूदा इस्करयोती हो भने अर्को यहूदालाई थेदियस पनि भनिन्छ। यीबाहेक फिलिप, नथनेल (जसलाई बारथोलोमाइ पनि भनिन्छ), मत्ती र थोमा पनि येशूका प्रेरितहरू हुन्‌।
सामरियाबाट फर्कनुभएपछि येशूले पहिलो चोटि प्रचार गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँ यसो भन्दै प्रचार गर्नुहुन्छ: ‘स्वर्गको राज्य नजिकै छ।’ त्यो राज्य के हो, तिमीलाई थाह छ? त्यो परमेश्‍वरको सरकार हो। त्यो सरकारको राजा येशू हुनुहुन्छ। उहाँले स्वर्गबाट राज्य गर्नुहुनेछ र पृथ्वीमा शान्ति ल्याउनुहुनेछ। परमेश्‍वरको राज्यले पूरै पृथ्वीलाई सुन्दर बगैंचा बनाउनेछ।
येशूले अहिले गालीलको डाँडामा बसेर मान्छेहरूलाई त्यही राज्यको विषयमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ यसो भन्‍नुहुन्छ: ‘तिमीहरूले यसरी प्रार्थना गर: “हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईंको नाउँ पवित्र गरिओस्‌। तपाईंको राज्य आओस्‌। तपाईंको इच्छा स्वर्गमा झैं यस पृथ्वीमा पूरा होस्‌।” ’ धेरैले यो प्रार्थनालाई ‘प्रभुको प्रार्थना’ भन्छन्‌। कसै-कसैले चाहिं यसलाई ‘हाम्रो पिताको’ प्रार्थना भन्छन्‌। के तिमीलाई यो प्रार्थना कण्ठ छ?
एकअर्कासित कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर पनि येशूले सिकाउनुहुन्छ। ‘अरूले जे जसो गरून्‌ भनी तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि अरूलाई त्यस्तै गर’ भनेर उहाँलाई बताउनुहुन्छ। के तिमीलाई अरूले दयालु व्यवहार गरेको मन पर्छ? त्यसो भए हामीले पनि अरूसित दयालु व्यवहार गर्नुपर्छ। येशूले यही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। सोच त, यो पृथ्वी प्रमोदवन हुँदा सबैले त्यसै गर्नेछन्‌ अनि त्यति बेला कत्ति रमाइलो हुनेछ!